Honor Play 9A bụ ọrụ: 6,3 "panel na nnukwu batrị ikike | Androidsis
Honor Play 9A bụ ọrụ: 6,3 ″ panel na batrị ikike dị ukwuu
Mgbe nyo gị ụdịdị, gafere TENAA y mara ụbọchị ntọhapụ, bụ nke Honor onye na-ekwuwapụta ọkwa eze nlereanya Play 9A, ụdị vitamin nke ama ama nke ọma 8A. Sub-brand nke Huawei chọrọ igbochi nwanna ihe site na ịrụ ọrụ nke ọma ma si otú a gbanwee ọnụahịa mmalite na ahịa ndị China.
Ekpere Play 9A na-emeziwanye n'akụkụ ụfọdụ dị ka batrị, ndị ọzọ Ram na ndị ọzọ ese foto, mfe karịsịa maara na 8A installs a n'azụ mmetụta. Mana ọ bụghị naanị ihe dị iche na ya, ya mere ọ ga-adọrọ mmasị mara mma nke bụ otu n'ime ihe ụlọ ọrụ rụworo ọrụ na ya.
1 Niile atụmatụ nke Honor 9A
Niile atụmatụ nke Honor 9A
El Sọpụrụ Sọpụrụnụ 9A Ọ na-amalite ndokwasa na a 6,3-anụ ọhịa panel na HD + mkpebi (1600 x 720 pikselụ), a dobe ekara notch na okpokolo agba kwụpụta nnọọ a bit. N'akụkụ a ihuenyo na-etolite ntakịrị, ebe 8A gụnyere 6-anụ ọhịa nwere otu mkpebi ahụ.
Na-elekọta MediaTek's Helio P35 processor, ya mere na-eketa otu CPU, na-ebunye 4 GB nke RAM ma na-enye nhọrọ nchekwa abụọ, 64 ma ọ bụ 128 GB, ma nhọrọ nwere ike ịgbasa site na kaadị MicroSD. Ọ bịarutere na sistemụ arụmọrụ nke Android 10 ya na oyi akwa UI 3.0.1.
Ugbua na azụ nke Honor Play 9A wụnye ihe mmetụta abụọ, ihe nke kachasị bụ megapixels 13 na ihe omimi 2 megapixel, na n'ihu ọ na-ebuli ihe mmetụta 8pipixel. Na Na-asọpụrụ 8A Ọ nwere ihe mmetụta 13 MP n'azụ na ihe mmetụta 8 MP n'ihu, ma ọ nweghị ihe omimi omimi.
Otu ihe dị mkpa banyere nwanne ya nwoke bụ na ọ na-eme ka batrị ya bukwuo ibu, Sọpụrụ Play 9A na nke a kpebiri ịwụnye 5.000 mAh 8A wụnye 3.020 mAh na mbido ya. Nkọwa ndị ọzọ nke smartphone bụ azụ akara mkpisiaka azụ, wuru na redio FM, isi okwu isi, njikọ Wi-Fi, ọdụ ụgbọ mmiri Bluetooth na MicroUSB.
El E gosiputara otuto na 9A na China, n'ihi na ugbu a ọ ga-abụ mba nke dị n'April 7. Honor 9A 4/64 GB dị ọnụ ahịa na 899 yuan (114,90 euro na ọnụego mgbanwe) na 4/128 GB ga-efu 1.199 yuan (euro 153,20 na ọnụego mgbanwe).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Honor Play 9A bụ ọrụ: 6,3 ″ panel na batrị ikike dị ukwuu
Ememe Ndagwurugwu 2, n'efu maka oge pere aka (ụbọchị atọ fọdụrụ)